Mgbe ị na-eji Mpempe akwụkwọ Bipute na Ubuntu gị, ọ naghị edepụtakwa njide na mkpokọta? Yabụ idozi ya | Site na Linux
Mgbe ị na-eji Mpempe akwụkwọ Bipute na Ubuntu gị, ọ naghị edepụtakwa njide na mkpokọta? Yabụ ị nwere ike idozi ya
Isaac | | Ọdịdị / Nhazi, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Na ụdị dị iche iche tupu Ubuntu 18.x ị nwere ike iji igodo Mbipụta Bipute iji gbanye ngwa ngwa ahụ wee nye gị ohere ịhọrọ n'etiti i copomi onyonyo ahụ weghaara na tebụl ma ọ bụ ịchekwa faịlụ onyonyo na aha ọ bụla ịchọrọ. Ma na eserese eserese ndị tara ahụhụ na nsụgharị ọhụrụ nke Ubuntu, ugbu a ị ga-ahụ na ngwa ahụ dị Nseta ihuenyo na ị nwere ike ịga n'ihu iji n'enweghị nsogbu.
N'aka nke ọzọ, ọ na-agwụ ike ma ọ bụrụ na imegheghị ya ma ọ bụ debe ya na launcher maka iji ya eme ihe ugboro ugboro. Nsogbu bụ na ọ bụrụ na ị pịa Mbipụta Mbipụta Onweghi ihe na egosiputa na ihuenyo. Ihe ọ na-eme na akpaghị aka bụ ijide ma chekwaa onyonyo ahụ enwetara na ndekọ foto nke ndekọ ebe obibi gị. Nke a bara uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa njide ahụ maka iji ya mee ihe n'ọdịnihu. Mana otutu ndi mmadu, dika m, na-eji ya n’oge ahu ka hazie ya.
N’ọnọdụ ndị ahụ, usoro ihe mgbe ochie bara uru karịa. Iji dozie ya na ihe mgbe itinyere Bipute Ihuenyo ọ na - ese onyinyo nke ihuenyo ma hapụ ya na clipboard nke mere na ị nwere ike Tapawa ya ozugbo ọ bụla ịbịaru ma ọ bụ foto retouching ngwa, ị nwere ike idozi ya na a nnọọ mfe n'ụzọ. Naanị ị ga-agbanwe ụzọ mkpirisi igodo ụzọ na desktọọpụ GNOME.
Ihe ị ga-eme dị mfe. Naanị soro usoro ndị a:
Mepee ngwa Nhazi Sistemụ na Ubuntu 18.x ma ọ bụ karịa.
N'akụkụ, n'etiti nhọrọ, chọọ Ngwaọrụ.
N'ime gaa Igwefoonu.
Ugbu a, n'etiti ntọala keyboard, chọta ubi abụọ kwekọrọ na nseta ihuenyo maka mkpirisi keyboard nke egosiri m gị na isi onyonyo nke edemede a.
Ga-ahụ nke ahụ n'ime Detuo nseta ihuenyo na clipboard, uzo mkpirisi bu Ctrl + Bipute ihuenyo. Ka ọ dị ugbu a Chekwa nseta ihuenyo na ihe oyiyi ewe naanị Mbipụta Mbipụta. Ihe ikwesiri ime bu itinye ego ya:
Pịa na nke mbụ na windo ga-apụta na-arịọ gị ka ị metụ igodo ma ọ bụ igodo ndị ịchọrọ ịhazi maka ihe ahụ. Wee pịa Bipute Ihuenyo.
Ugbu a, na nhọrọ nke abụọ, pịa na ya wee pịa Ctrl + Print Screen n'otu oge.
Nabata ma gawa.
Site ugbu a gaa n'ihu, oge ọ bụla ị metụrụ ihuenyo Bipute, ejide gị bọọlụ na ị nwere ike Tapawa ya ọ bụla ịbịaru ngwa ma ọ bụ ụlọ ọrụ akwụkwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Mgbe ị na-eji Mpempe akwụkwọ Bipute na Ubuntu gị, ọ naghị edepụtakwa njide na mkpokọta? Yabụ ị nwere ike idozi ya
Mario Ana dijo
Ajụjụ si neophyte, na gịnị kpatara ịgbanwe ihe na-arụ ọrụ ma ugbu a ị ga-aga ime mgbanwe na nhazi ahụ.
Gịnị mania ịgbanwe ihe ndị na-arụ ọrụ nke ọma iji na-amaghị ihe nche ụfọdụ ma ọ bụ mmemme ... Capture ihuenyo na-ahapụ keyboard czọ mkpirisi naanị n'ihi na onye ọrụ na-agba nkịtị na ya.
Ha bụ ụdị ihe na - ewebata onye ọhụụ na windo pụọ na linux.
Zaghachi Mario Anaya
Ihe omuma ihe omuma: Open Source Deep Learning SW
Facebook na-asọpụrụ mkpebi gị ịghara ịkekọrịta ọnọdụ gị, mana na-ekwusi ike ya ma na-aga n'ihu na-agbaso gị